Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » AmaSilamsi aseThailand amkela abanquli kwakhona
inkcubeko • Iindaba zeMpilo • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuthandaza kuvunyelwe kwimikhosi yamaThaialnd kwakhona
I-Ofisi yeSheikul Islam (i-SIO) eThailand ivume ukuqaliswa kwemithandazo kwiindawo zonqulo apho ubuncinci i-70% yabemi abaneminyaka eli-18 nangaphezulu bagonyelwe i-COVID-19.
Kukho ii-mosque ezingama-3,500 XNUMX eThailand ezinelona nani likhulu kwiPhondo lasePattani kwaye uninzi zinxulunyaniswa ne-Sunni Islam.
Ixesha lokuthandaza kwii-mosque ziya kuncitshiswa kwimizuzu engama-30, ngaphandle koLwezihlanu xa abakhonzi benokuthandaza kangangemizuzu engama-45.
Amanyathelo ezempilo oluntu kufuneka alandelwe kubandakanya ukunxiba imaski yobuso, ukudilika ekuhlaleni, kunye nococeko lwezandla.
I-SIO ikhuphe ingxelo isithi ngoku ivumela imithandazo kwimikhosi yamaSilamsi kwiindawo apho iikomiti zamaSilamsi zephondo kunye neerhuluneli zamaphondo ngokudibeneyo zigqibe ekubeni zinciphise izithintelo kwimisebenzi yezenkolo.
Iofisi ifuna amalungu ekomiti yamaSilamsi kwimikhosi yamaSilamsi nakubanquli ukuba bagonyiwe kube kanye. Ixesha lokuthandaza lilinganiselwe kwimizuzu engama-30 kunye nemithandazo yangoLwesihlanu kungabikho ngaphezu kwemizuzu engama-45.
Ngokutsho IOfisi yeSheikul IslamAbabekho kufuneka bathobele ngokungqongqo imilinganiselo yezempilo yoluntu kunye nesibhengezo se-SIO. Bayacelwa ukuba bahlolwe ubushushu bomzimba wabo ngaphambi kokungena kwi-mosque, banxibe imaski yobuso, kwaye ugcine umgama we-1.5 ukuya kwi-2 yeemitha phakathi komqolo ngamnye ngexesha lomthandazo. Ijeli yokucoca izandla kufuneka ifumaneke ngokulula.
Thayilendi inee-mosque ezingama-3,494, ngokweNational Statistics Office yaseThailand ngo-2007, ngama-636, eyona ndawo ininzi kwindawo enye, kwiPhondo lasePattani. NgokweSebe leMicimbi yezeNkolo (i-RAD), iipesenti ezingama-99 zemosque zinxulunyaniswa ne-Sunni Islam kunye nepesenti enye eseleyo yamaSilamsi.
Abemi baseThailand abangamaSilamsi bahlukile, kunye namaqela afudukele kude e-China, Pakistan, Cambodia, Bangladesh, Malaysia, nase Indonesia, kunye nokubandakanya ubuThais, ngelixa malunga nesibini kwisithathu samaSilamsi eThailand ngamaMalay Thai.
Ngokubanzi amakholwa okholo lwamaSilamsi eThailand alandela amasiko athile kunye nezithethe ezinxulumene nenkcubeko yamaSilamsi ephenjelelwa yiSufism. KumaSilamsi aseThai, njengabo basebenzisana nabo kwi-Asia-mpuma ye-Asia nakwamanye amazwe amaninzi ama-Buddhist, iMawlid sisikhumbuzo esingumqondiso wobukho be-Islam kweli lizwe. Ikwamele ithuba lonyaka lokuqinisekisa kwakhona imeko yamaSilamsi njengabemi baseThai kunye nokunyaniseka kwabo kubukhosi.
Inkolo yamaSilamsi eThailand ihlala ibonisa iinkolelo zeSufi kunye nezenzo njengakwamanye amazwe aseAsia anjengeBangladesh, iIndiya, iPakistan, iIndonesia neMalaysia. Icandelo loMphathiswa Wezenkcubeko liSebe lamaSilamsi linika amabhaso kumaSilamsi athe enza igalelo ekukhuthazeni nasekuphuhliseni ubomi baseThai kwindima yabo njengabemi, njengabahlohli nanjengonontlalontle. E-Bangkok, umnyhadala ophambili we-Ngarn Mawlid Klang ngumboniso odlamkileyo woluntu lwase-Thai Muslim kunye neendlela zabo zokuphila.